China Self-ukuqokelela Cervical Swab Kit abavelisi kunye nabanikezeli | J.able
Ukuziqokelelela iKhiti yeSwab yeCervical
Inombolo yomzekelo: FS-H11
Ukuqokelela ngokwakho ekhaya, Kulula ukuyisebenzisa
Inkqubo yonke-kwinye yokuqokelela umlomo wesibeleko, ukuzinzisa kunye nokuthutha, ukugcinwa
Igama leMveliso: I-Cervical Sampling Swab (Kit)
Ukusetyenziswa okucetywayo: Ukuqokelelwa kwesampuli yomlomo wesibeleko , ukuqokelela ngokwakho
Isicelo: Uvavanyo lwe-PCR yoMfanekiso, i-EIA, iNkcubeko yeNtsholongwane, uVavanyo lwe-Gynecological Disposable
Izinto eziphathekayo: Ingcebiso ye-Foam yezoNyango, i-ABS Stick kunye ne-Sleeve, iTube
Ukunyaniseka: iminyaka emi-2
1.Iisampulu kwindawo ehleliyo kunye neyokulala.
2. Vula iphakheji yemveliso, khupha i-swab yesampuli, kwaye ususe umkhono.
3. Umsebenzisi ubamba umzantsi wesiphelo somqheba kwaye ngokucothayo afake iswab ukusuka kwilungu lobufazi de i-baffle yokhuseleko ibambe ichweba lechweba lobufazi. Qaphela: Intloko yesampulu ayijikeleziswanga apha.
4. Jikelezisa umqheba ngasekunene 6-7 ujike ukujikelezisa intloko yesampulu iphume kumbhobho ukwenzela isampulu yelungu lobufazi.
5.Bamba isibambo kwaye ujike amaxesha angama-4-5 kwicala elifanayo. Qaphela: Ngexesha lenkqubo yokujija, gcina i-baffle yokhuseleko ichukumisa ichweba lechweba lobufazi.
6.Ukurhoxisa ngobunono i-sampling swab kwi-vaginal open, kwaye uqhubeke ujikeleza isiphatho de singakwazi ukujikeleza, ukwenzela ukuba ukudibanisa kwentloko yesampuli kuvele ngokupheleleyo.
7.Vula ikepusi yetyhubhu yesisombululo sokugcina, faka intloko yesampulu kwi-cell preservation fluid, vuthulula amaxesha angama-15-20 phezulu naphantsi, kwaye uqinise i-cap ye-tube ukugqiba isampulu.
1. Akukho mbali yobomi bezesondo; Kuphephe ukusebenzisa ngexesha lokuya esikhathini, ukukhulelwa kunye nokuncancisa;
2. Kuphephe ukusetyenziswa ngabasetyhini abanezilonda zesini (ukulimala, utyando, ukudumba, ithumba) okanye abasanda kwenziwa utyando lomlomo wesibeleko (cryotherapy, electrocination, tapering, laser). I-cervicitis ebukhali kufuneka inyangwe kuqala, kwaye emva koko ithathwe isampuli emva kokuchacha;
3. Ungabelani ngesondo okanye uhlambe iiyure ezingama-24 phambi kokuba uthathe iisampulu; Ukunkcenkceshela kwi-vaginal okanye iyeza le-intravaginal akufanele lenziwe phakathi kweentsuku ezi-3 ngaphambi kokuthatha isampuli;
4. Abo bakwimeko embi kakhulu kwaye banokuba sengozini yobomi ngexesha loviwo;
5. Le mveliso iyimveliso elahlayo kunye nokupakishwa okuzimeleyo, kuphela ukusetyenziswa komntu, ikiti enye kumntu omnye, engavumelekanga ukwabelana.
6. Ungasebenzisi xa ukupakishwa okuzimeleyo kubonakaliswe, intloko yesampula ibonakaliswe kwi-tube okanye intloko yesampuli ihlukaniswe ityhubhu;
7. Imveliso isetyenziswe ngabantu abaninzi, kwaye i-sampling swab operation ikhuselekile kwaye ayinabuhlungu, kodwa isakhuthazwa ukuba iyenze kwinkampani yabanye;
8. Ukuba ukopha okanye iintlungu eziqhubekayo zenzeka ngexesha lokuthatha isampuli, nceda uyeke utyando ngokukhawuleza kwaye uye esibhedlele ukuze ufumane unyango.
9. Xa usebenzisa, nikela ingqalelo kumhla wokuphelelwa kwemveliso, imveliso ephelelwe lixesha inqatshelwe ngokungqongqo ukuyisebenzisa;
10. Nika ingqalelo kuphawu lokupakisha kwaye ujonge ukuba iphakheji yonakele. Ukuba yonakele, akuvumelekanga ngokungqongqo ukusebenzisa.
11. Lahla ngokwendlela yonyango lwenkunkuma emva kokusetyenziswa.
Ngaphambili: Screw Cap Microtube
Okulandelayo: Umqokeleli amathe
Ikhithi yeMidiya yoThutho lweNtsholongwane, I-Nasopharyngeal Swab yabantwana, Buccal Swab Collection Kit, Iityhubhu zeMicrocentrifuge eziNdlongo, Imibhobho yeCentrifuge eZimeleyo, Iityhubhu ze-Falcon Centrifuge 15ml,